Akaebe - Dr. Adem
Enwere m nkwenye siri ike na ijigide iguzosi ike n'ihe nke sistemu ọrịa m na mkpebi siri ike m ịgwọ ọrịa cancer afọ nke anọ. Mgbe nyocha zuru ụwa ọnụ, ahọpụtara m Verita Life Hamburg maka otu ebumnuche a: Dr Adem Gunes. Achọpụtara m na ọ pụrụ iche n’etiti ndị niile m gwala okwu. O kwusiri ike na usoro ya bụ nke e mere iji wee gbuo 'ọrịa cancer' nke mbụ - ọgwụgwọ ahụ abụghị ọgwụgwọ dị mma. N'oge anyị na-eme mkparịta ụka, o jiri ndidi kọwaa ụzọ dị mkpa o si mee ihe bara uru nye m. Ihe dị mkpa bụ na ọ maghị maka ọgwụgwọ ahụ. Ọ dụrụ ọdụ na agbanyeghị ọgwụgwọ a na-akụkarị osisi, enwere nsogbu ndị ọzọ. Ma enwere ike ijikwa ndị a. Ọgwụgwọ m natara na mbido afọ si n'ụlọ ọgwụ Mexico dị oke ọnụ, ọ rụghachikwara ya. Izu atọ ka m laghachitere Australia, eji m ọnya na-egbu mgbu gbaba m na ngalaba ahụike mberede. Nyocha CT kpughere na otu n'ime isi akwara m etoola nke ukwuu, ọ bụ akụkụ akụrụ m. Ihe nlere anya PET-CT kpughere oghe maka uto. Yabụ, ebe m nwere ntụkwasị obi na Dr Gunes, ụjọ jidere m mgbe m nyere m ahụmahụ na Mexico. Erutere m Hamburg mgbe m fechara awa iri abụọ na isii, nwee mmetụta nke adịghị ike ma nwee nchekasị. Izu isii nke ọgwụgwọ bụ ihe ịma aka mana site na iwulite ntụkwasị obi kwa ụbọchị, ahụm ka ahụ m na-amalite imeghachi omume n'ụzọ dị mma. Thelọọgwụ ahụ n'onwe ya bụ nke ọgbara ọhụrụ ma ndị ọrụ mara mma, mara nka ma na-elekọta anya. Ogwu a bu 'ezigbo' - ajuju a m choro banyere ogwu ma obu ihe ogwu ma obu ihe ogwu n’ebere ogwu ka esi aza ya na sayensi; ma ọ bụ nyocha. Nke ka mkpa, a na-anwale ọbara kwa ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị nke abụọ ọ bụla iji chọpụta otú ahụ gị si emeghachi omume na ọgwụgwọ ahụ; ọ bụrụ na ahụ gị nwere ike ijikwa ọgwụgwọ ọzọ. Ndị ọrịa a na-agwọ n'ụlọ ọgwụ si n'akụkụ ụwa niile - ụfọdụ nwere ọrịa cancer dị oke egwu ma enweghị ike ịga ije ma ọ bụ ikwu okwu. Ọ bụ ihe ịtụnanya ikiri ọganihu ha n'oge usoro ọgwụgwọ. Mgbe izu isii nke ọgwụgwọ gasịrị, enweghị m ike ikwu na nwute m ịhapụ oge oyi Hamburg ma laghachi Australia dị anwụ na-acha. Mgbe izu ise gachara, enwetara m nyocha PET-CT ma mụta na ọnụọgụ abụọ nke ọnya m belatara pasent 26%; na tumo na ngụgụ m ghọrọ anụ ahụ. N’ofe bọọdụ ahụ, akwara niile belatara na SUV site na nkezi 60% ka ọ dị ka ọkwa, nke a na-ekwu na arụpụtara sistemu - dịka Dr Gunes gosipụtara. Nanị ihe na-eche ịlaghachi Australia bụ na enweghị m ike ịhụ Dr Gunes ma ọ bụ nweta ọgwụgwọ ya ebe a. Obi ga-adị m ụtọ ịkọrọ onye ọ bụla ihe m mere.
Anne Reeve, 57, AustraliaỌkpụkpụ Colon
Ihe mere Dr. Gunes ji bụrụ ihe pụrụ iche bụ nnukwu ihe omuma ya na ahụmịhe nke etu esi emeju, ọgwụ ọgwụ, ọgwụ chemotherapy na hyperthermia dị ala na-arụkọ ọrụ na sistemu na - alụ ọgụ ma na - egbusi ọrịa kansa. Ọ ghọtara ngakọta nke ijikọta usoro ọgwụgwọ dị iche iche, na-eme ka ndị ọrịa nwee ike ibi ndụ kacha mma. Achoputara m na isi okpukpo abuo a ghachara n’azu n’aho 2017. Nchoputa m na Integrative Medicine mere ka m banye n’otu ugbo elu ma jee mba ozo ka m zute na onye dibia a ma ama, Dr. Adem Gunes. Mgbe ọ gbasachara ụzọ o si eche echiche banyere nlekọta onye ọrịa, a rụụrụ ya site na ahụmịhe dị ukwuu na nchọpụta nyocha na ọgwụgwọ ọrịa kansa, yana nkwanye ùgwù na nkwanye ùgwù maka ọdịmma nke mmadụ ọ bụla, gosipụtara na m mere mkpebi dị mma. Dr. Gunes abụrụla ọfụma n'inyere m aka ịbanye na ndị ọrụ nlekọta ahụike na US, ka m na-aga n'ihu na-eduzi usoro ya maka nlekọta m. Ọdịnihu m dị mma. Chukwu gozie Dr. Dr. egbe na ndi otu gi. Mụ na ezinụlọ m nwere obi ekele ruo mgbe ebighị ebi.
Mike Lane, 55, United StatesỌrịa Brain
Achoputara m na Hodgkins Lymphoma, Agba 3, Ọgọst 2018. Mgbe ahịrị atọ nke Chemo therapy na Malta, Lymphoma m ka nọ n'ọrụ. Enyere m nke anọ na nke ikpeazụ nke Chemo na m jụrụ n'ihi oke mmanya nsonaazụ ahụrụ. Ekpebiri m ịmalite ịgwọ Dr. Adem, naanị n'ime izu isii ọgwụgwọ dị nro n'etiti ndị otu kachasị ịtụnanya, ọnya m belatara pasent 3 ma nweta ibu ma nwee ahụ ike karịa ka m malitere. Dr Adem, aga m achọ ikele gị maka ihe niile, ndị otu na ahụmịhe niile mara mma. Nnukwu ọrụ nye ndị niile metụtara yana mgbakwunye ọgwụgwọ ndị ọrịa nwere nnukwu ọmarịcha.
Kurt Spiteri, 30, MaltaLymphoma nke Hodgkin
Mgbe nwanne m nwanyị nke bi na Ireland chọpụtara ọrịa kansa, anyị chọrọ ịchọta ọgwụgwọ kachasị mma, yana ekele Dr. Adem Gunes, anyị chọtara ụlọ ọgwụ kacha mma maka ya. Dọkịnta Adem nyochara akụkọ banyere ahụike ma tụọ aro maka ọgwụgwọ agbakwunyere ma tụọ ọgwụ. Nwannem nwanyi nwetara ezigbo nlekọta ma ọria ya wee banye n'oké iwe ma ugbu a enweghị ọnweghị ọnya ahụ. Ọ lọtala n'ụlọ ugbu a n'usoro nri na nri ziri ezi. Dr. Adem nọrọ mgbe ahụ na -eche nwanne m nwanyị ma nyekwa aka na ndụmọdụ na aro. Aga m akwado Dr. Adem onye ọ bụla m maara na-arịa ọrịa kansa.
Agbagaara m aha dọkịta Adem, jikọtara ya na ihe omuma ya nke usoro ọgwụgwọ cancer dị iche iche nke German, mana ya na ozi ndị ọzọ ọ nwetara site n'ọmụmụ banyere ọgwụ herbal na mmetụta ha na ọrịa kansa. Mgbe m nwetara ndepụta nke usoro ntuziaka m, achọpụtara m na Dr. Adem bụ isi nke ọgwụgwọ ọrịa kansa,
Guy GirouardUnited States
Agaghị m ala azụ ịkwado ọrụ Dr. Adem dị ka o nyeworo anyị olileanya dị ukwuu n'oge a na-echegbu onwe. ”
Ahụmahụ m abụwo na Dr. Adem Gunes na-enye ọtụtụ ọrụ bara uru nke na-enweghị sọ ọlị. Chọ ihe ngwọta maka ọrịa kansa siri ike n'ọtụtụ ọkwa, yana ikekwe nsogbu kachasị dị mkpa bụ mkpa maka ọsọ na izi ezi n'ịchọ ụlọ ọrụ ọgwụgwọ ziri ezi.
Mgbe anyị zisachara Nnukwu Ahụike Oncologist anyị ma nyochaa nyocha niile maka ọganiihu, ọganiihu nke anwụrụ na radieshị, anyị matara na ọ bụ naanị Usoro ọgwụgwọ Ọrịa Cancer bụ maka anyị. Anyị chọtara Dr. Adem Gunes.
O nyeere m aka nke ukwuu inweta echiche Dr. Adem. M na-eme nyocha banyere usoro ọgwụgwọ ọzọ ọrịa cancer ma amaghị m ihe m ga-ahọrọ. Ọ tụziri m aka n'ụzọ ziri ezi